Recommended Skill Sets ofaProfessional System Engineer - BIM Trainings
Mar 14, 2016 | Posted by	kozeyar | Uncategorized	|
System Engineer Professional တတ်ရောက်ဖို့ လိုအပ်မဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပြောပြပေးပါဗျ.
ဆိုတဲ့မေးခွန်း BIM Trainings Facebook Page ရဲ့ comment မှာ မြင်မိခဲ့ ရလို့System Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ Professional System Engineer ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးများကို ကိုယ်သိသမျှလေးကို မျှဝေဖို့ ဆန္ဒလေးတွေ ဖြစ်လာမိပါတယ် ။
ပထမဦးစာ အခြေခံဖြစ်တဲ့ System Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ချက်များကို ဦးစာ ဆွေးနွေးလိုပါတယ်
ဒီနေ့ ရာမှာ ပြောဖို့ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပါ မပါမဖြစ်ြေ့ပာသင့်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ စာရေးသူတို့အသက်အရွယ်လူလတ်ပိုင်းအများစု အပါအ၀င် လူငယ်အများစုမှာ မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းပြီးစ အခြေနေမျိုးမှာ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက် နဲ့ ထပ်တူမကျတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေလေးတစ်ခုရှိနိူင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုနဲ့ တင် ဘ၀တွေကို လွယ်ကူစွာနဲ့ ဘဲ စတေးပစ်လိုက်ကြတာကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ တချို့ လူငယ်တွေမှာလည်း ဘာသာစကားများလေ့ လာလိုက်စားကြတာတွေ့ ရသလို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတက်ပညာသင်တမ်းများလည်းတက်ရင်း လေ့ လာရင်း အောင်မြင်သွားတဲ့ သူတွေ ရှိကြသလို လမ်းဆုံးအောင် ခရီးဆုံးအောင် မရောက်ခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်များစွာလည်း တွေ့ ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဆိုလိုခြင်တာက လူငယ်အများစုမှာ တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေစဲအချိန်ဖြစ်စေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးခါကဖြစ်စေ မိမိရဲ့ ဆန္ဒဘ၀ အမှန်တရားကို သိအောင် ဦးစွာကျြိးစားနိူင်ခဲ့ ရင်တော့မိမိဘ၀အတွက် အောင်မြင်မှု့ လမ်းစငယ်လေး စတွေ့ လိုက်တာပါဘဲ။ သို့ ပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရပ်တည်ဖြစ်နိူင်ဖို့ တော့အဘက်ဘက်ကဖိအားများစွာကို ခံနိူင်ရည်ရှိမှု့ တွေက စိန်ခေါ်မှု့ တွေပါဘဲ။ လူငယ်တွေအများစုဘ၀အာမံချက်ရရှိမှု့အတွက် အခြေခံအကျဆုံးကတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့ နဲ့အနည်းဆုံးဘာသာစကားတစ်ခုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာသင်ယူပြီး မိမိဝါသနာပါရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်ကို Certificate Level တစ်ခုတည်းတင်မကဘဲ Diploma Level တစ်ခုအထိပါ ကျွမ်းကျင်မှု့ နှင့်အတူ ဦးစွာယူထားသင့်ပါတယ်။
IT နယ်ပယ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့English Language တစ်ခုကိုတော့ မဖြစ်မနေ ဦးစွာလေ့ လာထားနိူင်ရင် အအောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုခြင်တာက နည်းပညာလေ့ လာတဲ့နေရာ အထောက်အကူ၇ယုံမျှသာမက မိမိလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့ အခါမှာပါ အသုံးဝင်နိူင်မှာပါ။ ထို့ နောက်မှာတော့မိမိဝါသနာနှင့်မိမိဆန္ဒတို့ နှင့်ထပ်တူညီတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာအတွက် အနိမ့် ဆုံး လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု့လက်မှတ် သို့ မဟုတ် Diploma လက်မှတ် ၇အောင်ယူထားလိုက်ပါ။ယခုဖေါ်ပြထားတဲ့ အချက်တွေက မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း Professional တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အမှန်တကယ်လိုအပ်သော အခြေခံအချက်လက်များသာဖြစ်ပါတယ်။
IT နယ်ပယ်အတွင်း Professional System Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ အတွက်တော့လိုအပ်ချက်များက အထက်မှာဖော်ပြခဲ့ တဲ့ အချက်အလက်တွေက စာဖက်သူတွေအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အခြေခံလိုအပ်များအပြင် မိမိတို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါမှာလည်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအသုံးနေတဲ့System ဥပမာ (Microsoft Server, Linux, VMware, Network,) များအပြင် လုပ်ငန်းအတွင်းအသုံးပြုနေသော Database Server, Application Server ,Development Server များရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု့ တိုင်းရဲ့ အခြေခံ concept တွေကို နားလည်ထားရပါတယ်။နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကိုယ်တိုင်က မိမိ Organization ရဲ့လိုအပ်ချက် ဖြည့် ဆည်းပေးနိူင်ခြင်းဟာ Organization ကလည်း မိမိကို ပြန်လည်အကျိုးပြုမယ်ဆိုတာ နားလည်စေချင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခါစမှာ ဦးစွာပထမအနေဖြင့် မိမိ ရှေ့ မှာ ရှိနေတဲ့ စီနီယာတွေဆီက အတွေ့ အကြုံတွေကို လက်လှမ်းမှီသလောက်သင်ယူပါ
ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ ဆက်လက်မျှဝေခြင်းတာက Professional System Engineer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို စာရေးသူလက်လှမ်းမှီသလောက်လေးမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ ၂၁ ရာစုနည်းပညာနယ်ပယ်မှာ ပြောင်းလဲခြင်းများ အရှိန်အဟုန်နဲ့ စီးဆင်းနေတယ်လို့ ပြောကြရရင် ငြင်းကြမယ်သူ အနည်းငယ်သာရှိပါလိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၂၀၀၀ ခုနစ်မတိုင်ခင်အချိန်တွေမှာ Microsoft, Linux, Cisco, Novel အစရှိတဲ့System များထဲမှာ မိမိ ၀ါသနာပါရာ System တစ်ခုကို Professional ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီး ကျန်တဲ့system Platform များကို General Learning လေ့ လာထားတယ်ဆိုရင် အခြေနေတစ်ခုအထိ ဖူလုံနိူင်ပေးမဲ့ယနေ့ နည်းပညာနယ်ပယ်ခောတ်မှာ Medium Business size လောက်ရှိတဲ့ Organization တိုင်းလိုလိုမှာပင် System Platform တစ်ခုတည်း နဲ့ဘဲ အလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေ မရှိသလောက်နည်းပါးလာကို တွေ့ မြင်နိူင်မှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ယနေ့ ခောတ် Medium business size တွေမှာ တွေ့ နိူင်မဲ့System အများစု တွေမှာ …. Database Server, Application Server, File Server, Development server, Data server စသဖြင့် အသုံးပြုလာကြတာကို တွေ့ မြင်နိူင်မှာပါ။ ဆိုလိုခြင်တာက စာရေးသူတို့ ရဲ့နည်းပညာနယ်ပယ်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေ အများစုကို မျှဝေခြင်တာလေးက မိမိကတော့ .. Cisco မှ Cisco … Linux မှ Linux …. VMware မှ Vmware …. Microsoft system ကတော့ လွယ်လို့ ကွာ မလုပ်တော့ ဖူး ….. Security expect … စသဖြင့် နည်းပညာ Platform ကိုဘဲ ဦးစားပေးတာ မလုပ်ပါနဲ့မိမိဝါသနာပါရာ System Platform ကို Deep Learning လုပ်ပြီး မိမိအလုပ်လုပ်နေတဲ့Organization ၇ဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိူင်ဖို့ ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ Professional System Engineer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ထပ်မံလိုအပ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့မိမိ Organization ရဲ့လုပ်ငန်း concept ပါဘဲ .. ဥပမာအားဖြင့် Hotel တစ်ခုမှာဆိုရင် အသုံးပြုတဲ့ application အတွင်း အသုံးပြု ချိတ်ဆက်နေတဲ့Department များရဲ့လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ( Front Office, Housekeeping, Food & beverage, Kitchen, Store, Sale, Marketing, Purchasing, Account, Human Recourses, General Affair and Engineering department) အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပုံ ကျောရိုးကို ကျွမ်းကျင်မှု့ ရှိနေပါမှ System Error, Database Error, Application Error စတာ တွေကို လွယ်ကူစွာနဲ့ ဖြေရှင်းနိူင်မှာပါ။ နောက်ထပ် Business type ဆိုရင်လည်း ထို့ အတူပါဘဲ…
Professional System Engineer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးများထဲမှာ နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ Ethic ပါဘဲ။ System Engineering တွေမှာ Organization တစ်ခုလုံးရဲ့Information အများစုကို သိရှိနေခြင်းက အစွန်းနှစ်ဘက်လုံးမှာရှိနေခြင်းအခြေနေဖြစ်နေလို့ အထက်ပါ Information များကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းမှု့ အတွက် Good Ethic လိုပါတယ်။ ထို့ အတူ မိမိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်နဲ့မိမိရဲ့ Organization ကို တန်ဖိုးထားသိတက်မှုကိုယ်ချင်းစားပေးတက်မှု့ တို့ ဟာလည်း မိမိရဲ့ စိတ်အတွင်း Good Moral ဖြစ်တည်နေခြင်းပါဘဲ။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုလိုခြင်တာက နည်းပညာနယ်ပယ်အတွင်းက ညီအကိုများ Technology Oriented အခြေနေတစ်ခုတည်းနဲ့ (ဥပမာ- Microsoft System Engineer, Linux System Engineer, VMware System Engineer) စသော အမြင်မျိုးတွေက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အောင်မြင်တဲ့Professional System Engineer အတားအဆီးတွေ ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ အဖွဲ့ အစည်းအတွင်းမှာ အောင်မြင်တဲ့ Professional System Engineer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေနိူင်ဖို့… မိမိအဖွဲ့ အစည်းက မိမိကိုယ်တန်ဖိုးထားနိူင်ဖို့ ဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်မှာ မတူညီတဲ့Skill Set, Knowledge, Experiences, Concepts ရှိထားစေခြင်ပါတယ်လို့့ မျှဝေရင်း………..
By KO Zey
System Engineer Professional တတျရောကျဖို့ လိုအပျမဲ့ အရညျအခငျြးတှေ ပွောပွပေးပါဗြ.
ဆိုတဲ့ မေးခှနျး BIM Trainings Facebook Page ရဲ့ comment မှာ မွငျမိခဲ့ရလို့System Engineer တဈယောကျဖွဈစဖေို့လိုအပျတဲ့အခွခေံလိုအပျခကျြမြား Professional System Engineer ကောငျး တဈယောကျဖွဈစဖေို့ လိုအပျတဲ့အရညျအသှေးမြားကို ကိုယျသိသမြှလေးကို မြှဝဖေို့ဆန်ဒလေးတှေ ဖွဈလာမိပါတယျ ။
ပထမဦးစာ အခွခေံဖွဈတဲ့System Engineer တဈယောကျဖွဈဖို့လိုအပျခကျြမြားကို ဦးစာ ဆှေးနှေးလိုပါတယျ
ဒီနရေ့ာမှာ ပွောဖို့ဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ပညာရေးစနဈကိုပါ မပါမဖွဈြေ့ပာသငျ့တယျလို့ထငျမွငျယူဆပါတယျ။ စာရေးသူတို့ အသကျအရှယျလူလတျပိုငျးအမြားစု အပါအဝငျ လူငယျအမြားစုမှာ မိမိတို့သကျဆိုငျရာ တက်ကသိုလျမြားမှ ကြောငျးပွီးစ အခွနေမြေိုးမှာ ရညျရှယျခကျြ ရညျမှနျးခကျြ နဲ့ထပျတူမကတြဲ့ကိုယျပိုငျဝငျငှလေေးတဈခုရှိနိူငျတဲ့အလုပျတဈခုနဲ့တငျ ဘ၀တှကေို လှယျကူစှာနဲ့ဘဲ စတေးပဈလိုကျကွတာကို စိတျမကောငျးစှာနဲ့ကွုံတှခေဲ့ဖူးပါတယျ။ တခြို့ လူငယျတှမှောလညျး ဘာသာစကားမြားလလေ့ာလိုကျစားကွတာတှရေ့သလို အသကျမှေးဝမျးကြောငျးအတကျပညာသငျတမျးမြားလညျးတကျရငျး လလေ့ာရငျး အောငျမွငျသှားတဲ့သူတှေ ရှိကွသလို လမျးဆုံးအောငျ ခရီးဆုံးအောငျ မရောကျခဲ့ကွတဲ့လူငယျမြားစှာလညျး တှခေဲ့ဖူးပါတယျ။ ဆိုလိုခွငျတာက လူငယျအမြားစုမှာ တက်ကသိုလျတကျရောကျနစေဲအခြိနျဖွဈစေ တက်ကသိုလျကြောငျးပွီးခါကဖွဈစေ မိမိရဲ့ဆန်ဒဘ၀ အမှနျတရားကို သိအောငျ ဦးစှာကြွိးစားနိူငျခဲ့ရငျတော့ မိမိဘဝအတှကျ အောငျမွငျမှု့လမျးစငယျလေး စတှလေို့ကျတာပါဘဲ။ သို့ပမေဲ့ မှနျကနျတဲ့လမျးကွောငျးပျေါမှာ ရပျတညျဖွဈနိူငျဖို့တော့ အဘကျဘကျကဖိအားမြားစှာကို ခံနိူငျရညျရှိမှု့ တှကေ စိနျချေါမှု့တှပေါဘဲ။ လူငယျတှအေမြားစုဘဝအာမံခကျြရရှိမှု့အတှကျ အခွခေံအကဆြုံးကတော့ တက်ကသိုလျဝနျထမျးအောငျမွငျပွီးတဲ့နဲ့ အနညျးဆုံးဘာသာစကားတဈခုကြှမျးကငျြအောငျလလေ့ာသငျယူပွီး မိမိဝါသနာပါရာ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပညာရပျကို Certificate Level တဈခုတညျးတငျမကဘဲ Diploma Level တဈခုအထိပါ ကြှမျးကငျြမှု့နှငျ့အတူ ဦးစှာယူထားသငျ့ပါတယျ။
IT နယျပယျအတှငျးမှာဆိုရငျတော့ English Language တဈခုကိုတော့မဖွဈမနေ ဦးစှာလလေ့ာထားနိူငျရငျ အအောငျဆုံးဖွဈပါတယျ။ ဆိုလိုခွငျတာက နညျးပညာလလေ့ာတဲ့နရော အထောကျအကူ၇ယုံမြှသာမက မိမိလုပျငနျးခှငျဝငျတဲ့အခါမှာပါ အသုံးဝငျနိူငျမှာပါ။ ထို့နောကျမှာတော့ မိမိဝါသနာနှငျ့မိမိဆန်ဒတို့နှငျ့ထပျတူညီတဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပညာအတှကျ အနိမျ့ဆုံး လုပျငနျးခှငျကြှမျးကငျြမှု့ လကျမှတျ သို့မဟုတျ Diploma လကျမှတျ ၇အောငျယူထားလိုကျပါ။ယခုဖျေါပွထားတဲ့အခကျြတှကေ မိမိလုပျငနျးခှငျအတှငျး Professional တဈယောကျဖွဈဖို့ အမှနျတကယျလိုအပျသော အခွခေံအခကျြလကျမြားသာဖွဈပါတယျ။
IT နယျပယျအတှငျး Professional System Engineer တဈယောကျဖွဈစဖေို့အတှကျတော့ လိုအပျခကျြမြားက အထကျမှာဖျောပွခဲ့တဲ့အခကျြအလကျတှကေ စာဖကျသူတှအေတှကျ မှနျကနျတဲ့အခွခေံလိုအပျမြားအပွငျ မိမိတို့လုပျငနျးခှငျဝငျတဲ့အခါမှာလညျး လုပျငနျးခှငျအတှငျးအသုံးနတေဲ့ System ဥပမာ (Microsoft Server, Linux, VMware, Network,) မြားအပွငျ လုပျငနျးအတှငျးအသုံးပွုနသေော Database Server, Application Server ,Development Server မြားရဲ့ လုပျဆောငျမှု့တိုငျးရဲ့အခွခေံ concept တှကေို နားလညျထားရပါတယျ။နောကျတဈခုပွောခငျြတာကတော့ ကိုယျတိုငျက မိမိ Organization ရဲ့လိုအပျခကျြ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိူငျခွငျးဟာ Organization ကလညျး မိမိကို ပွနျလညျအကြိုးပွုမယျဆိုတာ နားလညျစခေငျြပါတယျ။လုပျငနျးခှငျဝငျခါစမှာ ဦးစှာပထမအနဖွေငျ့ မိမိ ရှေ့ မှာ ရှိနတေဲ့စီနီယာတှဆေီက အတှအေ့ကွုံတှကေို လကျလှမျးမှီသလောကျသငျယူပါ
ဒုတိယပိုငျးအနနေဲ့ဆကျလကျမြှဝခွေငျးတာက Professional System Engineer ကောငျးတဈယောကျဖွဈစဖေို့လိုအပျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို စာရေးသူလကျလှမျးမှီသလောကျလေးမြှဝပေေးခွငျးပါတယျ။ ၂၁ ရာစုနညျးပညာနယျပယျမှာ ပွောငျးလဲခွငျးမြား အရှိနျအဟုနျနဲ့စီးဆငျးနတေယျလို့ပွောကွရရငျ ငွငျးကွမယျသူ အနညျးငယျသာရှိပါလိမျ့မယျ။ လှနျခဲ့တဲ့၂၀၀၀ ခုနဈမတိုငျခငျအခြိနျတှမှော Microsoft, Linux, Cisco, Novel အစရှိတဲ့ System မြားထဲမှာ မိမိ ဝါသနာပါရာ System တဈခုကို Professional ဖွဈအောငျကွိုးစားပွီး ကနျြတဲ့ system Platform မြားကို General Learning လလေ့ာထားတယျဆိုရငျ အခွနေတေဈခုအထိ ဖူလုံနိူငျပေးမဲ့ ယနနေ့ညျးပညာနယျပယျခောတျမှာ Medium Business size လောကျရှိတဲ့Organization တိုငျးလိုလိုမှာပငျ System Platform တဈခုတညျး နဲ့ ဘဲ အလုပျလုပျကွတာမြိုးတှေ မရှိသလောကျနညျးပါးလာကို တှမွေ့ငျနိူငျမှာပါ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ယနခေ့ောတျ Medium business size တှမှော တှနေိူ့ငျမဲ့ System အမြားစု တှမှော …. Database Server, Application Server, File Server, Development server, Data server စသဖွငျ့ အသုံးပွုလာကွတာကို တှမွေ့ငျနိူငျမှာပါ။ ဆိုလိုခွငျတာက စာရေးသူတို့ရဲ့ နညျးပညာနယျပယျအတှငျး အလုပျလုပျကိုငျနကွေတဲ့ သူတှေ အမြားစုကို မြှဝခွေငျတာလေးက မိမိကတော့ .. Cisco မှ Cisco … Linux မှ Linux …. VMware မှ Vmware …. Microsoft system ကတော့လှယျလို့ကှာ မလုပျတော့ဖူး ….. Security expect … စသဖွငျ့ နညျးပညာ Platform ကိုဘဲ ဦးစားပေးတာ မလုပျပါနဲ့ မိမိဝါသနာပါရာ System Platform ကို Deep Learning လုပျပွီး မိမိအလုပျလုပျနတေဲ့ Organization ရဲ့ လုပျငနျးလိုအပျခကျြကိုလညျး ဖွညျ့ဆညျးပေးနိူငျဖို့ကွိုးစားစခေငျြပါတယျ။ Professional System Engineer ကောငျးတဈယောကျဖွဈစဖေို့လိုအပျတဲ့ ထပျမံလိုအပျခကျြနောကျတဈခုကတော့ မိမိ Organization ရဲ့ လုပျငနျး concept ပါဘဲ .. ဥပမာအားဖွငျ့ Hotel တဈခုမှာဆိုရငျ အသုံးပွုတဲ့application အတှငျး အသုံးပွု ခြိတျဆကျနတေဲ့ Department မြားရဲ့လုပျငနျးအဆငျ့ဆငျ့ ( Front Office, Housekeeping, Food & beverage, Kitchen, Store, Sale, Marketing, Purchasing, Account, Human Recourses, General Affair and Engineering department) အစရှိတဲ့ လုပျငနျးလုပျဆောငျပုံ ကြောရိုးကို ကြှမျးကငျြမှု့ရှိနပေါမှ System Error, Database Error, Application Error စတာ တှကေို လှယျကူစှာနဲ့ဖွရှေငျးနိူငျမှာပါ။ နောကျထပျ Business type ဆိုရငျလညျး ထို့အတူပါဘဲ…
Professional System Engineer ကောငျးတဈယောကျဖွဈစဖေို့လိုအပျတဲ့ အရညျအသှေးမြားထဲမှာ နောကျဆုံးအရေးကွီးတဲ့အခကျြတဈခုကတော့Ethic ပါဘဲ။ System Engineering တှမှော Organization တဈခုလုံးရဲ့ Information အမြားစုကို သိရှိနခွေငျးက အစှနျးနှဈဘကျလုံးမှာရှိနခွေငျးအခွနေဖွေဈနလေို့အထကျပါ Information မြားကို လုံခွုံစှာ ထိနျးသိမျးမှု့အတှကျ Good Ethic လိုပါတယျ။ ထို့အတူ မိမိလုပျနတေဲ့အလုပျနဲ့ မိမိရဲ့Organization ကို တနျဖိုးထားသိတကျမှုကိုယျခငျြးစားပေးတကျမှု့တို့ဟာလညျး မိမိရဲ့စိတျအတှငျး Good Moral ဖွဈတညျနခွေငျးပါဘဲ။
အခြုပျအားဖွငျ့ဆိုလိုခွငျတာက နညျးပညာနယျပယျအတှငျးက ညီအကိုမြား Technology Oriented အခွနေတေဈခုတညျးနဲ့(ဥပမာ- Microsoft System Engineer, Linux System Engineer, VMware System Engineer) စသော အမွငျမြိုးတှကေ လုပျငနျးခှငျအတှငျး အောငျမွငျတဲ့ Professional System Engineer အတားအဆီးတှေ ဖွဈနိူငျပါတယျ။ မိမိရဲ့ အဖှဲ့အစညျးအတှငျးမှာ အောငျမွငျတဲ့Professional System Engineer ကောငျးတဈယောကျဖွဈစနေိူငျဖို့ … မိမိအဖှဲ့အစညျးက မိမိကိုယျတနျဖိုးထားနိူငျဖို့ဆိုတာ မိမိကိုယျတိုငျမှာ မတူညီတဲ့ Skill Set, Knowledge, Experiences, Concepts ရှိထားစခွေငျပါတယျလို့ မြှဝရေငျး………..